စင်ကာပူတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်ပါက ရက်ပိုင်းထိကြာသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် နာရီပု? - Yangon Media Group
စင်ကာပူတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်ပါက ရက်ပိုင်းထိကြာသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် နာရီပု?
စင်ကာပူ တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ် တောက်ပါက ရက်ပိုင်းထိကြာ သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် နာရီပိုင်းသာကြာဟု လျှပ်စစ်စွမ်း အင်ဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင် ကပြောကြားလိုက်သည်။ ဧပြီ ၂၉ရက်၊ ပြည်သူ့လွှတ် တော်အစည်းအဝေးတွင် ကျောက် တံတားမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ် ဦးနေမျိုးထက်မေးမြန်းသည့်”၂၀၁၉ ခုနှစ်နွေရာသီကာလ ဖြစ်သောမတ်လ၊ ဧပြီလနှင့် မေလ တို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံလျှပ်စစ်သုံးစွဲ မှုမဂ္ဂါဝပ်မည်မျှရှိသည်ကို ၀န်ကြီး ဌာနမှ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားမှုအ ခြေအနေနှင့် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက် မှုမရှိစေရန်မည်ကဲ့သို့ စီစဉ်ဆောင် ရွက်ထားသည်ကို သိရှိ လိုကြောင်း” မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န် ကြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင်က အထက် ပါအတိုင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင်က “ပြည်သူတွေလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးအခြေအနေ များရရှိအောင် အထူးကြိုးပမ်းစီ စဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း ဆည်ရေများ ကျဆင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ အခြေအနေ ကို ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အခုနွေရာသီကာ လမှာတော့မျှတ ခွဲဝေသုံးစွဲတဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ပြည်သူ တွေကို လျှပ်စစ်ပေးလျက်ရှိပါ ကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု အနည်း ဆုံးဖြစ်အောင် ၀န်ကြီးဌာနအနေနဲ့ အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် နေပါတယ် ” ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။
ယင်းနောက် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးနေမျိုးထက်က အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ လျှပ်စစ်ပြဿနာ ကြုံတွေ့နေရသော်လည်း မြန်မာ နိုင်ငံထက်လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက် မှုပိုမိုနည်းပါးကြောင်း၊ နွေရာသီ တွင် လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်ခြင်း ကို နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရပြီးလက် ရှိခေတ်ကာလအရ ပြည်သူများအ နေဖြင့်လည်း လျှပ်စစ်မီးရရှိမှသာ စီးပွားရေးတိုးတက်ပြီး လူမှုဘ၀ဖူလုံမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ၀န်ကြီးဌာနအနေဖြင့် လာမည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် နွေရာသီတွင် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ရေး အတွက်တစ်နှစ်အတွင်း မည်သို့ ဆောင်ရွက်သွားမည်ကို သိရှိလို ကြောင်းဆက်စပ်မေး ခွန်းမေးမြန်းခဲ့သည်။
ယင်းအပေါ်တွင် ဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင်က “အခြား နိုင်ငံတွေမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မပြတ်တောက်ဘူးဆိုတာ မဟုတ် ပါဘူး။ စင်ကာပူမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်သွားချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့လို နာရီပိုင်းတောင် ပြန်မရဘဲနဲ့ ရက်တောင်ကြာပါ တယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဓာတ် အားပြတ်တောက်သွားချိန်မှာ နှစ်ပတ် ကြာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက် မှု ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာမည်သည့် ရက်မဆိုတစ်ရက်အတွင်းမှာ နာရီ ပိုင်းနဲ့နှစ်နာရီ၊ သုံးနာရီအတွင်း ပြန်ရအောင် ကျွန်တော်တို့ကြိုး ပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ အခြား နိုင်ငံတွေမှာလျှပ်စစ်ပြတ်တောက် မှုနည်းတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ အ ခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ လျှပ်စစ်ပမာဏနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကဏ္ဍမှာ ဘတ်ဂျက်သုံးစွဲရခွင့် ပမာဏကို နှိုင်းယှဉ်တင်ပြလိုပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မပြတ် တောက်ဖို့ မည်ကဲ့သို့စီမံဆောင် ရွက်မလဲဆိုရင် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်း အင်ဝန်ကြီးဌာနက နှစ်စဉ် တင်ပြ တောင်းခံတဲ့ ဘတ်ဂျက်ပမာဏ များအားလုံးကို ခွင့်ပြုပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းင်းကပြော သည်။
ယင်းအပြင် လျှပ်စစ်ဓာတ် အား ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် အခုရေတွင်းတူး၊ အခုရေကြည်သောက်၍ မရကြောင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ် အားပေးစက်ရုံများကို တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက ခုနစ်နှစ်၊ ရှစ်နှစ် ကြာမြင့်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်အခြေအနေအရ ငါးနှစ်မှ ၁၀နှစ်ဆက်တိုက်ကြိုးစားမှ အောင် မြင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းင်းကဆက် လက်ပြောသည်။
ဗီယက်နမ်နှင့် ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှုဖြစ်ပြီးနောက် ငါးဖမ်းသမား ၁၂ ဦးကို အင်ဒိုနီးရှား ထိ?
ဦးကိုနီလုပ်ကြံမခံရမီ ဇေယျာဖြိုးနှင့် တရားခံပြေး အောင်ဝင်းခိုင်တို့ တယ်လီဖုန်း စဉ်ဆက်မပြ